Apple waxay dooneysaa inay la wareegto shabakada Podcast Wondery | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay rabtaa inay la wareegto shabakada Wondery podcast
Warbixin cusub oo ka socota Bloomberg ayaa sheeganeysa in Apple ay ka mid tahay shirkadaha wadahadalka la yeeshay helitaanka shabakada 'Wondery podcast'. Kaliya maahan. Waxaa lagu xantaa inay jiraan afar shirkadood oo doonaya inay la shaqeeyaan shirkadda ku takhasustay Podcasting. Dhamaantood waxay kujiraan boos ay kuheli karaan, inkasta oo lacagta la codsaday ay caqabad ku noqon karto, hubaal in heshiis dhowaan la gaari doono. Wondery waxay weydiisaneysaa qaddar aad u sarreeya shirkad kasta oo ka tirsan qaybta. Waxaa la yiri kuma guureyno inta u dhexeysa 300 illaa 400 milyan oo doolar.
Afar shirkadood ayaa hadda xiiseynaya inay la wareegaan shirkad ku takhasustay shabakadda Podcast, Wondery. Apple waa mid ka mid ah, sida ku cad wararka xanta ah ee soo baxay ee ay ku celcelisay shirkadda dhexdhexaadka ah ee Bloomerg. Xaqiiqdii, waxay ku sifeyneysaa Wondery inay tahay "mid ka mid ah shabakadaha ugu waaweyn ee madax-bannaan ee Podcast-ka iyo istuudiyaha, iyagoo gaaraaya dhagaystayaal bil kasta ka badan 8 milyan oo qof." Waxaa jira isticmaaleyaal badan oo cusub oo shirkad kasta ah Applena waxay si fiican ugu isticmaali kartaa inay haysato wadartaan dheeriga ah kuwa raacsan Apple Music.
Waxaa aasaasay 2016 maamulaha telefishanka hore Hernán López, Wondery waxay soo saartay boodhadhkii ugu caansanaa sanadihii la soo dhaafay. Si kastaba ha noqotee, wax walbaa maahan wax qurxan. Maamulka ayaa lagu eedeeyay inuu laaluushay saraakiisha kubada cagta intii uu u shaqeynayay Qarniga 21-aad Fox.
Nasiib wanaag Spotify ama Sirius XM Holdings Inc. ma aha mid ka mid ah saddexdaas shirkadood ee kale ee doonaya inay helaan adeegyada Wondery, maxaa yeelay waayo-aragnimada aan haysanno, waxaan ognahay inay mar horeba heli lahaayeen, sidii ay ku sameeyeen shirkado badan oo ku yaal waaxda, hore. Sida laga soo xigtay khubarada, waxaan ku dhaqaaqeynaa sicirro waxoogaa ka sarreeya iibiyadii hore ee shirkadahaan. Tusaale ahaan, haddii 400-ka milyan ee ugu dambeyn la bixiyo, waxay noqon doontaa qiime ka sarreeya wixii Spotify ay ku bixisay Ringer iyo Gimlet Media, ama waxa Sirius XM Holdings Inc. ay ku bixisay Stitcher.
Sida ay sheegayaan wararka. heshiis ayaa la filayaa mararka qaar "bilaha soo socda". Si kastaba ha noqotee, wadaxaajoodyadu way fashilmi karaan wakhti kasta, maxaa yeelay sidaan horay u sheegnay, qiimaha aan ku dhaqaaqno waxoogaa sare ayuu u yahay waxa loo adeegsaday qaybtan. Ma cada cida shirkada ugu cadcad wadahadalada. Bloomberg waxay xustay in qiimaha $ 300-400 milyan laga yaabo inay cabsi geliso qandaraasleyda qaar.
Xanta kale waxay soo jeedinayaan in Apple mooyee, Sony sidoo kale waxay xiiseyneysaa inay iibsato shirkadan. Shirkadda Jabbaan waxay maalgashatay dhowr shirkadood oo wax duuba oo maalgelisay daraasiin podcasts ah. Waxa kale oo ay noqotay midda ugu dagaalka badan saddexda shirkadood ee muusikada waaweyn. Si kastaba ha noqotee, waxaan u maleyneynaa in Apple ay aad u xiiseyneyso iibsashada shirkadan. Horaantii sanadkan, waxaa la shaaciyey in Apple TV + uu soo saari doono taxane kooban oo sheegi doona sheekada WeWork, oo ku saleysan Wondery podcast "WeCrashed: Kicitaanka iyo Dhicitaanka WeWork«. Iskusoo wada duuboo, Wondery ayaa la sheegay inay horumarinayso in ka badan daraasado TV ah iyada oo ku saleysan barnaamijyadeeda asalka ah.
Wixii Apple, Wondery waxay u badan tahay bartilmaameedka helitaanka weyn kor u kaca awgood waxay siin kartaa Apple Podcasts iyo Apple TV +. Shirkadda Californian waxay si tartiib tartiib ah u ballaarineysay dadaalladeeda ku saabsan baahinta barnaamijyada, iyadoo lagu soo bandhigayo barnaamijyo telefishan oo bogaadin mudan oo had iyo jeer wata shaabadda asalka. Laakiin sidoo kale helitaanka barnaamijka Podcast, Scout FM bilawgii sanadkan.
Waqtigaan la joogo, Podcasts maahan warshad aad u ballaaran. Waxay ka soo saaraan wax ka yar $ 85 bilyan sanadkii iibinta xayeysiiska Mareykanka, sida laga soo xigtay Xafiiska Xayeysiinta Isdhexgalka. Laakiin awoodda kobaca suuqa ayaa gacan ka geysatay kor u qaadista saamiyada Spotify sannadkan, ilaa XNUMX%. Marka way cadahay in qaybtani tahay ganacsi aamin ah. Apple way ogtahay tan mana rabto in laga tago. Waan hubaa inuu sameyn doono wax walba oo karaankiisa ah si uu u ilaaliyo Wondery.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Apple waxay rabtaa inay la wareegto shabakada Wondery podcast
Fiidiyow muujinaya hawlgalka Magofe Duo
PhotoScape X Photo Editor ee Mac ayaa lagu cusbooneysiiyay waxyaabo badan oo cusub